OTU ESI EMEPỤTA NSETA IHUENYO NA MICROSOFT WORD - WINDOWS - 2019
Otu esi emepụta nseta ihuenyo na Microsoft Word
Ịme ihe ntanetị bụ otu n'ime ọrụ kachasị maka ọtụtụ ndị ọrụ: mgbe ụfọdụ ịkọrọ onye ọzọ ihe oyiyi, na mgbe ụfọdụ iji tinye ha n'ime akwụkwọ. Ọ bụghị onye ọ bụla maara na na ikpe ikpe ikpeazụ ahụ, ịmepụta nseta ihuenyo ga-ekwe omume ozugbo site na Microsoft Okwu ma tinyezie ya na akpaaka.
Na nkenke nkuzi a banyere otu esi ewepu nseta ihuenyo ma ọ bụ mpaghara na-eji ngwa ntinye ihe ngebichi n'ime okwu. Ọ pụkwara ịba uru: Otu esi mepụta nseta ihuenyo na Windows 10, Iji iji ihe ntinye ederede ihuenyo iji mepụta screenshots.
Ngwaọrụ arụpụtara maka ịmepụta nseta ihuenyo na Okwu
Ọ bụrụ na ịga na taabụ "Tinye" taabụ na nchịkọta nhọrọ nke Microsoft Word, n'ebe ahụ ị ga-ahụ otu ngwaọrụ nke na-enye gị ohere ịtinye ihe dị iche iche n'ime akwụkwọ ediri.
Tinyere, ebe ị nwere ike ime na mepee nseta ihuenyo.
Pịa bọtịnụ "Atụmatụ".
Họrọ Snapshot, wee họrọ windo ịchọrọ iwepụta (ndepụta nke windo ndị ghere oghe karịa Okwu ga-egosiputa), ma ọ bụ pịa Were Snapshot (Clipping screen).
Ọ bụrụ na ịhọrọ windo, a ga-ewepụ ya kpamkpam. Ọ bụrụ na ịhọrọ "Mgbanyụ ihu", ị ga-achọ ịpị na windo ma ọ bụ desktọọpụ, wee họrọ klas ahụ na òké, nseta ihuenyo nke ịchọrọ ime.
Ntube ihuenyo ahụ e mepụtara ga-etinye aka na akpaghị aka n'ime akwụkwọ ahụ na ọnọdụ ebe ọbụla dị.
N'ezie, maka nbudata ihuenyo ahụ, ihe omume niile dị maka ihe oyiyi ndị ọzọ dị na Okwu dị: ị nwere ike igbanwe ya, megharịa ya, tinye ihe nchịkọta ederede a chọrọ.
N'ozuzu, nke a bụ maka iji ohere, echere m, ọ gaghị enwe nsogbu.